Na-ege ntị Spotify music na Spotify adịchaghị
< 8 Spotify Onyinye Kaadị
Part 1: Gịnị bụ Spotify adịchaghị?
Nkebi nke 2: Olee otú iji nweta Spotify adịchaghị
Download Spotify music free na TunesGo na-ege ntị na-enweghị Spotify adịchaghị
Nzọụkwụ 3. syncing
The Spotify bụ ihe kasị mma Music Platform maka music Mme niile gburugburu ụwa. The Spotify-enye ohere na-ege ntị nke music niile Genres na e dere otu n'ime ndị kasị collections nke music na ụwa. Na Nhọrọ nke na-akpọ songs, ịdị na listi ọkpụkpọ, na-ege songs online na offline, na Spotify awade kasị mma ikpo okwu maka music hụrụ n'ụwa nile. Spotify abịa na atọ edemede nke nwere ike ịbụ Free, nzọ ụkwụ na adịchaghị na-akpọ ka kpọmkwem. Na ụfọdụ na-agaghị emeli na free version nke Spotify, na adịchaghị version nke Spotify, awade otu nke kasị mma collection atụmatụ n'etiti ndị niile ya asọmpi niile gburugburu ụwa.
Spotify adịchaghị awade mgbasa ozi free songs na-ege ntị nhọrọ ka ọrụ na-enye onye nke kasị mma audio n'elu ikpo okwu n'ụdị 320 kbps. N'ihi ya, elu àgwà nke songs na-enweghị mgbasa ozi bụ ẹkenemede Spotify adịchaghị. Na ọtụtụ ihe atụmatụ, nke na-metụtara Spotify adịchaghị, na nhọrọ dị ka offline-ege egwú na-otu n'ime ha. The nnukwu collection nke songs bụ nnọọ akụkụ ọzọ metụtara Spotify na nsụgharị.
Uru nke Spotify adịchaghị
Na Spotify adịchaghị, ị na-isiokwu iji Spotify na-egwu ọ bụla song ị chọrọ na mgbe ị chọrọ. N'ihi ya, i nwere ike na-achọ ihe ọ bụla n'oge ọ bụla nke oge. Ị nwekwara nhọrọ ịchọta ma na-anụ listi ọkpụkpọ, ma ọ bụ na-achọpụta ọhụrụ music. Ị pụrụ ọbụna ịmepụta na dezie listi ọkpụkpọ na ndị nwere ikike ịkọrọ music na listi ọkpụkpọ. Na Spotify adịchaghị, ị pụrụ ige ntị na-awụ ọsọ n'ugwu ẹmende site Spotify Radio atụmatụ. Ọ dịghị Mgbasaozi bụ ihe ị na-na Spotify adịchaghị. Ọbụna, na mobiles ị bụ entitles na otu uru dị ka e kwuru n'elu.
Dị iche n'etiti Spotify adịchaghị na Spotify Free
The Spotify abịa isi na abụọ nsụgharị, otu na free ka ndị ọzọ na dị ka adịchaghị, nwere ihe iji na na onye ọ bụla ọzọ. Na free akaụntụ, na ị na-entitles naanị eke ndepụta ọkpụkpọ gị na nwere na ihe owuwu Ka ịkpọgharịa ọ bụla listi ọkpụkpọ ma ọ bụ artists katalọgụ. Mgbe adịchaghị na akaụntụ ịgụ bụ entitles ka ihe niile, nke Spotify awade. Na free akaụntụ, ị nwere iburu nkụda mmụọ nke na-agbanwe agbanwe mgbasa ozi popping mgbe na-ege egwú, na-mgbe ị nọ n'eluigwe na adịchaghị na akaụntụ nke Spotify. Ọzọ isi ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ na na free version nke Spotify, ị nwere ike ghara ige ntị music offline, mgbe adịchaghị ekwe ka offline music ege ntị owuwu ka ọrụ.
Ọzọ dị mkpa dị iche, mgbe ọ na-abịa atụnyere nke ọdịyo àgwà, free version awade audio àgwà nke dị nnọọ 192 kbps, mgbe mgbe anyị na-ekwu okwu banyere adịchaghị version nke Spotify, na bit ọnụego nke 320 kbps bụ na-enye.
Gịnị bụ Spotify price? Bụ Spotify adịchaghị kwesịrị ya?
Spotify bụ ngwa, nke na-abịa free nke na-eri maka ndị na-adịghị chọrọ na-eji ọbụna otu penny na maka ndị chọrọ inyocha zuru ezu atụmatụ, adịchaghị nhọrọ dị. N'ihi ya, ma na nsụgharị ndị na-enye na Spotify. The Spotify adịchaghị-abịa ná price nke 9,99 dollar kwa ọnwa. Mgbe ị na-agụ nke a price, ụfọdụ n'ime ha ga-amalite na-eche echiche 'ma' na-akwụ ụgwọ dị otú ahụ a ego kwesịrị? '. N'ihi na ndị na, anyị nwere ike ikwu na atụmatụ nke abịa na Spotify adịchaghị bụ nnukwu na zuru ezu nnwere onwe na-eji gị music ụwa, mkpebi na-akwụ ụgwọ elu 9,99 dollar ga-kacha mma.
Free maka agbalị? Spotify adịchaghị maka amụrụ? Na ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ
E nwere nnọọ ọzọ version, nke nwere ike na-akpọ ka ikpe version, nke awade nzọ nke ụbọchị 30 na price nke ihe ọ bụla. Na ọ na-eri aka, ị pụrụ nnọọ inweta atụmatụ na ihe niile uru nke adịchaghị na akaụntụ maka gburugburu ụbọchị 30 na ọtụtụ ndị mba. Otú ọ dị, ná mba ụfọdụ, oge a nke 60 ụbọchị. Na ụfọdụ usoro na ọnọdụ inweta dị otú ahụ eweta, n'ụdị ọrụ ndị na-tụrụ ụtụ adịchaghị ma ọ bụ Unlimited ọrụ ma ọ bụ bụ ndị jiworo ikpe bụ ineligible n'ihi na nke a na-enye ', nhọrọ nwere ike iwere site họrọ ndị naanị.
Spotify adịchaghị awade ụfọdụ ego maka ndị ụmụ akwụkwọ. Na oge na gburugburu 50% anya maka ụmụ akwụkwọ, nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ ahụ bụ otu nke a ndụ. Ọ na-ekwe ha na-edebe ha pụọ ​​n'ebe manụ na mgbasa ozi na nwere ohere zuru ezu atụmatụ nke Spotify.
Nkebi nke 2: Olee otú iji nweta adịchaghị Spotify
Nduzi n'ihi na free Spotify ikpe
Spotify free nzọ ụkwụ nwere ike availed si ukara website nke Spotify. All tyou mkpa ya sleect nhọrọ nke free version nke Spotify na ị mkpa aha site na itinye niile nkọwa mkpa.
Nduzi n'ihi na Spotify adịchaghị for free
Iji inweta adịchaghị atụmatụ maka free, niile ị chọrọ bụ gaa ukara website ma họrọ ikpe mbipute adịchaghị nhọrọ. Site na ịdenye site na nhọrọ, na ị na-nye ha ikike inweta atụmatụ nke adịchaghị Spotify na price nke ihe ọ bụla maka ọnwa nke mbụ.
Nduzi n'ihi na adịchaghị Spotify maka amụrụ
N'ihi na adịchaghị Spotify akaụntụ, onye ọrụ bu n'obi ga-abụ na-amụrụ na maka ụmụ akwụkwọ na website njikọ pụrụ https://www.spotify.com/uk/student/.
Nduzi n'ihi na adịchaghị Spotify maka ezinụlọ
The Spotify Family bụ nnọọ ọhụrụ version nke Spotify, nke na-enye ohere zuru ezu ezinụlọ inweta ọrụ nke adịchaghị. N'ihi na onye ọ bụla ọzọ so, ị nwere nhọrọ ịzọpụta gburugburu 50% nke ego maka ọ bụla ọzọ so na. Na Spotify adịchaghị na akaụntụ maka ezinụlọ, gị na ezinụlọ gị nwere nhọrọ na-enwe iche iche listi ọkpụkpọ na memberships na ọtụtụ ndị ọzọ uru metụtara adịchaghị akaụntụ.
Torrent Software Download maka Devices
Olee otú Download Napster Music na Napster Music Downloader
> Resource> Music> Gee Spotify Music na Spotify adịchaghị